Nkọwa Weebụ Web | Martech Zone
Nchịkọta Weebụ Pịa
Sunday, Eprel 15, 2007 Sunday, Eprel 15, 2007 Douglas Karr
Ndị folks n'elu na Sellsius na-atụ aro Clicky dị ka weebụ ọzọ nchịkọta ngwugwu. M na-eji Google Analytics ugbu a ma ọ dị mma - mana ọ ka na-esiri m ike ịgbagha ma gbatuo data ịchọrọ. Nseta ihuenyo maka Clicky dị mma, enweghị m ike ichere igwu.
Nke a nwere ike ịbụ ngwugwu nke m na-akwado ndị ahịa m niile - ọ nweghị nnabata. Nwere ike nweta nkwalite ka ọkachamara version maka naanị $ 2 kwa ọnwa!
M na-eji ngwa a, nke dabere na ya, nke a na-akpọ pmetrics. N'ụzọ dị mwute n'ụbọchị nke ọzọ ọ dị nnọọ enweghị usoro okụrede. Amalitere m iji ya mgbe m nwesịrị afọ ojuju na njedebe nke google analytics, nke google a etinyebeghị mbọ zuru oke.
Achọpụtara m na nhọrọ nke pmetrics dị oke mma, ma ọ dịghị atụnyere nchịkọta google, ọnụọgụ m na-adị ala mgbe niile na ọkara nke njirimara anaghị arụ ọrụ.
Weebụsaịtị a maka Clicky bụ kpọmkwem otu pmetrics nwere ọkọlọtọ ọhụrụ. Enwere m olileanya na tweaked ọrụ a na-arụ ọrụ nke ọma, m ga-anwale ya (na njikọ ntinye aka gị:)). Enwere m olileanya na eziokwu ahụ bụ na ngwa a na-emeghe ga-apụta na ụyọkọ ihe omume stats webụ dị jụụ ga-amalite ịmalite n'ihi na a ka nwere ohere maka onye na-abịa ma mee mmemme okporo ụzọ weebụ nke ọma.
Mgbe m jisịrị ya awa ole na ole, enwere m ike ịkwupụta na nke a enweghị nsogbu ọ bụla m nwetara na pmetrics. Nnukwu Ọrụ.
Apr 16, 2007 na 8: 14 AM
Chaị, nke ahụ bụ eserese mara mma, dị ọcha, dịkwa mfe ọgụgụ. Ị ga-eche na ụlọ ọrụ ọtụtụ ijeri dollar dị ka Google ga-enwe ike ma ọ dịkarịa ala nweta chaatị dị mma. Daalụ maka ndụmọdụ ahụ!
Onye ndụmọdụ nyocha webụ
Sep 19, 2007 na 6: 51 AM
M lere anya n'ime Clicky mana m ka nwere echiche na Google Analytics kacha mma maka ịmalite na nchịkọta weebụ. Ọ bụrụ na ịchọta na Google na-amachi mgbe ahụ ọ ga-abụ oge ịmalite ịchọ azịza akwụ ụgwọ dị ka ClickTracks ma ọ bụ NetTracker iji nye gị ikike ịza ajụjụ.